Yintoni iCorel Draw: yintoni na kunye neemfuno | Abadali be-Intanethi
Yintoni iCorel Draw
Ukuza kuthi ga ngoku siyazi iinkqubo ezininzi eziququzelela umsebenzi wokuyila okanye uyilo. Bambalwa kuthi abazaziyo iinkqubo ezininzi ezithe zayilwa zadalelwa ukwenza lo msebenzi ube lula kuthi. Kodwa kuhlala kubalulekile ukuthathela ingqalelo ezinye zazo kuba zibaluleke kakhulu ukuba uyilo lomzobo luninzi kubomi bethu.
Kule post size kuthetha nawe malunga neCorel Draw, ukuba awuyazi, iya kuba sisixhobo sakho esitsha okanye isoftwe njengoko ukhetha ukuyibiza. Hlala nathi kwaye uhlanganyele nathi kwesi sikhokelo sitsha esiye sayila hayi ngaphezulu nangaphantsi kuwe.
1 Yintoni iCorel Draw
1.1 ukuba kwenzeka njani
1.2 imisebenzi ephambili
2 Izinto eziluncedo nezingalunganga
3 Iimfuno zofakelo
CorelDraw, sesona sicelo siphambili soluhlu lweenkqubo I-CorelDRAW Graphics Suite enikezelwa yiCorel Corporation kwaye yenzelwe ukuhlangabezana neemfuno ezininzi, ezifana nomzobo, ukwakheka kwephepha lokuprinta kunye nokupapashwa kwewebhu, zonke zibandakanyiwe kwinkqubo enye. Yinkqubo egcina iimpawu ezifana ne-Adobe InDesign Photoshop okanye i-Illustrator.
Le yisoftware ebalaseleyo eyenzelwe abathandi boyilo lwegraphic. Le nkqubo ikuvumela ukuba wenze uyilo ngendlela yobungcali, unezixhobo ekulula kakhulu ukuzisebenzisa kumsebenzisi. Enye yeenzuzo zeCorelDraw kukuba umsebenzisi ungakhetha phakathi kweenguqulelo ezahlukeneyo, Njengoko kukhankanyiwe ngasentla kukho iinguqulelo zeengcali kunye nezinye iinguqulelo ezingezizo ezobuchwephesha. Ngamnye wabo ulungelelanisa kwinqanaba onalo, okwenza kube nomtsalane ngakumbi kwaye kulula ukuhamba kuyo.
Inguqulelo yamva nje yale software yiCorel Draw x9, ngumlandeli weCorel Draw x8, izisa nezixhobo ezitsha, ujongano oluhle kakhulu, olulula kakhulu ukutolika kumsebenzisi, apho uya kukwazi ukwenza uyilo. ngokobuchule bakho.
ukuba kwenzeka njani
Umthombo: Umdaniso Olungileyo
I-CorelDRAW yathatha ihlabathi lemizobo yekhompyutha ngo-1989, ivelisa umfanekiso ogcweleyo wevector kunye nenkqubo yoyilo, yokuqala yohlobo lwayo. Kwiminyaka emibini kamva, uCorel waphinda waliguqula ishishini kwakhona, wazisa eyona graphics yokuqala-in-one kunye nenguqulo 3, edibanisa umzobo wevector, uyilo lwephepha, ukuhlela ifoto kunye nokunye okuninzi kwiphakheji enye.
Kwiminyaka engamashumi amabini kamva, i-CorelDRAW Graphics Suite X4 iyaqhubeka nokutsha, izisa ukufomatha okubhaliweyo okuphilayo okutsha, iileya ezihlukeneyo kwiphepha, kunye nokudibanisa neenkonzo ukwenzela ukuba intsebenziswano yexesha langempela. Le nguqulo yenzelwe inkqubo yokusebenza yeWindows yamva nje, iqhubeleka nesiko layo njengeyona graphics suite yeePC.
I-Corel Draw sisixhobo esisebenza ngokukodwa ngee-vectors. IiVectors ziluncedo kakhulu ukuba ufuna ntoni yenza iilogo, ii-icon, iincwadana, amakhadi oshishino njl.njl.
Phakathi kwemisebenzi eyenziwa yiCorel Draw, kubonakala ukuba ineembono eziphuculweyo, ulawulo kunye neendawo zokuhlala, ikwanayo nesixhobo se-LiveSketch kunye nezilayidi ezisebenzayo, oko kukuthi, inkqubo inokusebenzisana kwiqonga layo.
Ikwanayo nezixhobo ezinje nge-gaussian blur, isixhobo sokukopisha, ukuphilisa i-clone, ukubekwa esweni okuninzi, umphathi wefonti, ukungenisa indawo yokusebenza, izincedisi zeepeni ezinamandla njl.
Ukukhetha: Ikuvumela ukuba usebenze ngoyilo, oko kukuthi, jikelisa kwaye uthambekele ngaphandle kokutshintsha ubungakanani bayo.
Inguqu yasimahla: Ivumela ukutshintsha izinto ngesikali sasimahla, ukujikeleza simahla kunye nokuthambeka simahla.
Ukhetho lwasimahlaUkhetho lwento ekhululekileyo.
Izixhobo zokuhlela imilo: Njenge-Ideal Smooth yokwandisa ubume bezinto ngokunciphisa iindawo kunye nokususa imiphetho, imilo enceda ukuhlela ukumila kwento kunye nokujikeleza okuncedayo ekwenzeni iziphumo ezizodwa kuyilo lwento.
Blur: Fometha isiqalelo ngokunxibelelana nezandiso ezenza oku okanye yenza i-idents macala onke kwimida yayo.
Yinkqubo yevektha, eyenza kube lula ukwenza uyilo olunje ngokuprinta, ukukrolwa, kwaye kuba lusekwe kwivenkile, ungalwandisa uyilo lwakho kwaye ungalahli umgangatho walo Kungenxa yokuba le phakheji isebenza ngezinto ezahlukeneyo.
Kukho iinguqulelo ngeSpanish, ngelixa ezinye iinkampani ezenza isoftware zinganikeli ngqalelo kwimarike yaseSpain okanye yesiLatin.
isoftware leyo inkxaso inkqubo yamaphepha amaninzi, oko kukuthi, igcina ibhalansi kumacala omabini ephepha.
Ngaphandle kokufakwa kwi-PC, inokufakwa kwi-MAC, njengeenkqubo zokusebenza ezinje ngeWindows kunye neLinux.
Inokuqhubekeka nefayile yeOfisi (yeMicrosoft).
Uncedo lokusebenza nolunye uyilo oluphuhliswe kwezinye iipakeji ezinje ngomzekelo we "illustrator".
Ixhasa ukuhanjiswa kwemifanekiso kunye nolwandiso lwe-TIF, olungenziwanga zezinye iinkqubo.
Inezixhobo zokuhlela ngokukhawuleza, oko kukuthi, ngaphandle kokwenza unqakrazo oluninzi.
Unethuba lokufumana inkxaso kwiwebhu ukuba kukho ingxaki ngexesha lophuhliso.
Ungahlela iifoto njenge sikhatshwa Photo-Paint, bitwise umfanekiso-based editing software.
Ithatha indawo enkulu yehard drive.
Isoftware enexabiso eliphezulu kakhulu.
idla inkumbulo eninzi xa ulungisa umfanekiso.
Kufuneka ube nekhompyuter enoqwalaselo oluphambili ukuze kuqhutyekwe nemizobo
Kuyacetyiswa ukuba kufakwe ikhadi levidiyo le-OpenCL 1.2 elithobelayo
Uyifakile i-AMD Ryzen 3/5/9/i-threadripper ye-EPYC iprosesa
I-4 GB ye-RAM
Yiba ne-4 GB yendawo yasimahla kwi-hard drive
Iscreen esinesisombululo se-1280 x 720 kwi-100% (96 dpi)
Isikrini kufuneka sichukumise ngeendlela ezininzi, okanye sibe neempawu ezifanayo
Isakhelo se-NET 4.7.2
Ukuba inguqulo yeCorelDraw yibhokisi yebhokisi, kufuneka ibe umnikazi weDVD drive, ukuba ukhuphelo 900 MB ukusuka DVD.
Kuyimfuneko ukuba unxibelelwano lwe-intanethi ukufakela kunye nokuqinisekiswa.
Kufuneka ube neprosesa ye-Intel ye-multi-core (ii-cores ezi-4 ezinengqiqo okanye ezingaphezulu) ezixhasa i-64-bit
Imemori ye-4 GB ye-RAM, kuyacetyiswa ukuba inkumbulo ibe nkulu kune-4
Isikrini kufuneka sibe nayo Isisombululo se-1280 x 800 kwezinye iimeko isisombululo se-1920 x 1080 siyacetyiswa
Yiba nekhadi levidiyo elihambelana nalo elifakwe nge-OpenCl 1.2
Yiba ne-4GB yendawo ekhululekileyo yediski.
Ithebhulethi yemizobo okanye imouse.
Ukwenza ufakelo kufuneka unonxibelelwano lwe-intanethi.
Ngo-1989 bakhupha i-1.0 ubukhulu becala yenzelwe iMicrosoft Windows 286, ukuba yinguqulelo yakudala xa kuthelekiswa nemigangatho yangoku. Ukuguqula ihlabathi loyilo lwegraphic.
1990 inguqulelo 1.11 iyaphuma: Kolu guqulelo lwemizobo kwimizobo emibini nemithathu yaziswa.
I-1991 i-CorelDraw 2 ikhutshwe kunye nomsebenzi wokuShicilela, amandla ayo ayenokuxuba zombini isicatshulwa kunye neempawu zegraphic kwaye zikwazi ukuziprinta, zaphuma kunye nezixhobo ezinokuwohloka kunye nokuxuba izinto ngendlela yayo.
I-CorelDRAW 12: Inguqulelo ekhutshwe kwi-2004, kule nguqulo isakhiwo sayo sangaphakathi saphuculwa kwaye senziwe lula, oku kwenze ukuba ibe yiprogram enobuchule, eyomeleleyo kunye nokulinganisela.
CorelDRAW X3: Kolu guqulelo into entsha ye-vector ibandakanyiwe "I-Corel PowerTRACE", umsebenzi wayo wokuguqula iimephu ezithile kwimizobo yeVector, inguqulelo ekhutshwe ngo-2007.
I-Corel X4: Inguqulelo oyongezileyo Ulwakhiwo lokubhaliweyo olwaluza kubonwa ngaphambili, iimpawu okanye iimpawu zeetekisi ngaphambi kokuba zisetyenziswe kwisicatshulwa, inguqulo ngonyaka we-2008 iya kwimarike.
ZOBA X5: Ubukhulu becala le nguqulo yenzelwe iWindows 7 inkqubo yokusebenza, uphuhliso loyilo lwahlengahlengiswa, lwaphuculwa ukuhamba komsebenzi, kwaye lwalungiswa ukuze lusebenze kunye neeprosesa ezininzi. Ngo-2010 le nguqulelo yakhululwa.
CorelDRAW X6: Kolu guqulelo i-injini yokuchwetheza enamandla yongezwa, kunye nezinto ezinomsebenzi omkhulu (i-spiral, guqula, ukunciphisa, ukutsala), inguqulelo ebekwe kwimarike ngo-2012.
I-CorelDRAW X7: Imisebenzi iphuculwe, izixhobo ezitsha kunye nesakhiwo esitsha senziwe.
I-DRAW 2017: Ngale nguqulo, isixhobo esitsha esibizwa ngokuba yi-LiveSketch siphunyeziwe, esisebenzisa ukusebenza kakuhle kwenethiwekhi ye-neural. Beka kwimarike kwi-2017.
I-CorelDRAW 2018: I-block shadow element yongezwa evumela ukuba ungeze izithunzi kwizinto. Inguqulelo ehamba kwimarike ngo-Epreli 2018.
I-CorelDRAW 2019: Kule nguqulo, iifom zemathematika zibandakanyiwe. Iya kwimarike ngoMatshi ka-2019.
Ukuba into oyikhangelayo yinkqubo elungileyo yokuyila kwaye iinketho ze-Adobe azikuqinisekisi, iCorel Draw ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona ndlela zibalaseleyo onokuthi uzibandakanye kuluhlu lwakho. Kananjalo ineenguqulelo ezahlukeneyo, nganye kuzo ibonelela ngophuculo lwenkqubo eyenza umsebenzi ube lula ngakumbi. Yeyona nkqubo ifanelekileyo kuba ifanelekile kwiinkqubo ezinjengeWindows kunye neMac, oku kuvumela ukuba kungabikho ngxaki kwiinkqubo.
Ukuba, ngakolunye uhlangothi, awufumananga umbono omhle wale nkqubo, unokuthembela kwiiprogram zesibini ezifana neCanva, Photoshop. I-Inskape, i-Affinity Designer okanye i-Tailor Brands. Ngoku ixesha lifikile lokuba uzame ukukhuphela kunye nokuyifaka kwiPC yakho, kwaye uzivumele ukuba ulahleke sisixhobo ngasinye kunye nokhetho olukhoyo kuyo, kwaye ukuba unokuthandabuza ngakumbi ngayo, sikusombululela lula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni iCorel Draw